सुन्दा अचम्म लाग्छ होला २ लाखमा किनेको भैँसी ८१ लाखमा बिक्री दूधकाे विश्व रेकर्ड
May 8, 2020 May 8, 2020 by साहारा संदेश
सुन्दा पनि अहिले हजुर हरुलाई अचम्म लाग्छ होला । आज हामी एक अनौठो कुरा लिएर एजेन्सी मार्फत आएका छौ । त्यो पनि सामान्य भैंसी को बारे मा हो आज हामिले एक घर पालुवा भैंसी जुन अहिलेसम्म कै नया र नौलो नै होला र हजुरहरु ले बिश्वास मान्नुहोला । सबैभन्दा धेरै दूध दिएर विश्व रेकर्ड राखेको भारतको एक भैँसी भारु ५१ लाख (नेपाली ८१ लाख ६० हजार) मा बिक्री भएको छ ।
हरियाणाका किसान सुखवीर सिंहले पालेको मुर्रा जातको भैँसी सोमबार यति ठूलो मूल्यमा बिक्री भएको हो । सरस्वती नाम दिइएको उक्त भैँसीले ३३.१३१ किलो दूध दिएर एक पाकिस्तानी भैँसीको धेरै दूध दिने विश्व रेकर्ड तोडेको थियो । यसअघि पाकिस्तानी कृषकले पालेको भैँसीले ३२.०५० किलो दूध दिएर विश्व रेकर्ड राखेको थियो । सरस्वती भैँसी लुधियानाका पवित्र सिंहले खरिद गरेका छन ।
कुनै समय एक करोड रुपैयाँमा पनि बिक्री नगरेका सुखवीरले भैँसी चोरिने डर भएपछि ८१ लाख ६० हजारमा बिक्री गरेका हुन । भैँसी बेच्नुअघि किसानले एउटा कार्यक्रम राखेका थिए। जसमा राजस्थान, युपी, पञ्जाबलगायतका ठाउँबाट करिब ७ सय किसान सहभागी भएका थिए । सुखवीरका अनुसार उनले चार वर्षअघि बरवाला जिल्लाको खोखा गाउँका किसान
गोपीरामबाट उक्त भैँसी २ लाख ८ हजारमा खरिद गरेका थिए । किसान सुखवीर सिंहका अनुसार सरस्वती भैँसीले गत वर्ष २९.३१ किलो दूध दिएर हिसार क्षेत्रमा आयोजित एक प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार हासिल गरेको थियो । हिसारको सेन्ट्रल इन्स्टिच्युट अफ बफेलो रिसर्चको कार्यक्रममा पनि २८.७ किलो दूध दिएर पुरस्कार जितेको थियो ।
हरियाणा पशुधन विकास बोर्डको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा समेत उक्त भैँसीले २८.८ किलो दूध दिएर पुरस्कार जितेको थियो । पछिल्लो पटक केही दिनअघि लुधियानाको जगरांवमा आयोजित डेरी एण्ड एग्रो एक्स्पोमा भाग लिँदा सरस्वती भैँसीले ३३.१३१ किलो दूध दिएर भारु. दुई लाख (ने.रु.३ लाख २० हजार) नगद पुरस्कार जितेको थियो । एजेन्सी
Prevनेपाल प्रहरीको साहसी काम: भारत सीमामा हतियार सहित नेपाल प्रवेश गर्नेलाई यसरी धपाइयो
Nextयो कस्तो जागिर ? युवतीलाई अँगालो हालेर सुताउनेलाई १ घण्टाको ८ हजार तलब